पार्टी एकताको मुख्य डिजाइनरलाई सुरुमै भयो धोका, एमालेका पौडेललाई पुरस्कार !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पार्टी एकताको मुख्य डिजाइनरलाई सुरुमै भयो धोका, एमालेका पौडेललाई पुरस्कार !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, जेष्ठ ३, २०७५
काठमाडौं – पार्टी एकीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई सुरुवाती चरणमै ठूलो झट्का लागेको छ ।
एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको ‘नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी’को ९ सदस्यीय हाइकमाण्डमा शर्मा छुटेका छन् । पार्टी एकीकरणमा खटपट भएका बेला केपी ओलीको निर्देशनमा विष्णु पौडेलसँग मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी एकीकरण गराउन शर्माले नै भूमिका खेलेका थिए ।
प्रचण्डभन्दा पनि ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा हेरिएका शर्मालाई हाइकमाण्डमा नराखेर कारबाही गरेको भनेर बालुवाटारमा टिप्पणी भएको छ । यो निर्णयले शर्मालाई झट्का लागेको छ ।
हाइकमाण्डको प्रवक्ताको जिम्मेवारी माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन् । एमालेका विष्णु पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पौडेलले संगठनको काम गर्नेछन् । शर्माले पौडेलसँग मिलेर पार्टी एकीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए । पौडेल हाइकमाण्डको जिम्मेवारीसहित पुरस्कृत भए । तर, शर्मालाई हाइकमाण्डमा राखिएन । हाइकमाण्डमा नपरेपछि शर्माले मन अमिलो बनाएका छन् ।
हाइकमाण्डमा ओली र प्रचण्डका साथै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहनेछन् ।